वर्सेनि ७५ लाख मानिसको ज्यान लिने उच्च रक्तचाप यसरी घटाउन सकिन्छ: डा. अनिल भट्टराई | Bhalakushari
वर्सेनि ७५ लाख मानिसको ज्यान लिने उच्च रक्तचाप यसरी घटाउन सकिन्छ: डा. अनिल भट्टराई
व्यस्त र तनावपूर्ण जिन्दगीको कारण मानिसहरुमा उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार उच्च रक्तचापको कारण मात्र संसारभरमा वर्सेनि ७५ लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्‍यु हुने गरेको छ । यो संख्या मानिस मृत्यु हुने कूल संख्याको १२ प्रतिशत हो । बढ्दो उमेरलाई यसको मुख्य कारणको रुपमा मानिन्छ । युवा अवस्थामा पनि यो समस्या देखिएता पनि ६०–६९ बर्षको उमेर समूहलाई यसले बढी सताउने गरेको छ । हृदयघातको हुनुको कारणहरु मध्ये उच्च रक्तचाप पनि एक हो भनिन्छ, तर यी दुई बिच के–कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने बिषयमा थोरै मानिसलाई मात्र अवगत छ । शुक्रबार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हो, यसै सन्दर्भमा उच्च रक्तचाप र हृदयघात कसरी सम्बन्धित छन्, प्रेसरको औषधी खानु ठीक छ कि छैन ?